Waa maxay Macluumaadka Weyn? Waa maxay Faa'iidooyinka Xogta Weyn? | Martech Zone
Waa maxay Macluumaadka Weyn? Waa maxay Faa'iidooyinka Xogta Weyn?
Arbacada, Maarso 8, 2017 Jimco, Diisambar 1, 2017 Douglas Karr
Balanqaadkii xog weyn ayaa ah in shirkaduhu ay yeelan doonaan sirdoon aad u fara badan oo ay awood u leeyihiin inay ku gaaraan go'aano sax ah iyo saadaalin ku saabsan sida ganacsigooda u shaqeynayo. Aynu xoogaa aragti ka helno Xogta Weyn, maxay tahay, iyo sababta ay tahay inaan u isticmaalno.
Xogta Weyn waa koox weyn
Ma ahan waxa aan halkaan kaga hadlayno, laakiin waxaa laga yaabaa inaad si wanaagsan u dhagaysan karto hees weyn inta aad wax ka akhrineyso Xogta Weyn Kuma soo darayo fiidiyowga muusigga really runtii ammaan uma aha shaqada. PS: Waxaan la yaabanahay haddii ay u doorteen magaca inay qabtaan mowjadda caanka ah xog weyn ayaa isa soo taraysay.
Waa Maxay Xogta Weyn?
Xogta waawayn waa eray loo adeegsado in lagu sharaxo uruurinta, farsamaynta iyo helitaanka tiro aad u tiro badan oo xog qulquli ah waqtiga-dhabta ah. Saddexda V waa mugga, xawaaraha iyo noocyada kala duwan oo leh amaah Doug Laney). Shirkaduhu waxay isku darayaan suuqgeynta, iibka, xogta macaamiisha, xogta macaamilka, wada hadalka bulshada iyo xitaa xogta dibada sida qiimaha saamiyada, cimilada iyo wararka si loo aqoonsado isku xirnaanshaha iyo sababaha tusaalooyinka tirakoobka ku habboon si looga caawiyo inay gaaraan go'aanno sax ah.
Maxay Xogta Weyn u Kala Duwan tahay?
Maalmihii hore… waad ogtahay… dhawr sano ka hor, waxaan u adeegsan lahayn nidaamyo aan ku soo saareyno, ku badalno kuna shubi karno xogta (ETL) bakhaarada keydka xogta ee waaweyn ee xalalka sirdoonka ganacsiga lagu dul dhisay si loo soo sheego. Marmar, nidaamyada oo dhami waxay kaydinayaan oo isku darayaan xogta galka xogta halkaas oo warbixinnada lagu wadi karo qof walbana ka heli karo aragti ku saabsan waxa socda.
Dhibaatadu waxay ahayd in teknolojiyadda keydka keydku ay si fudud u xamili kari weydo qulqulo badan oo xog ah. Waxay xamili wayday mugga xogta. Kuma beddeli karto xogta soo socota waqtiga-dhabta ah. Iyo qalabkii wax lagu tebin jiray ayaa ka maqnaa oo aan waxba ka qaban karin wax aan ka ahayn weydiin xiriir oo ku saabsan dhamaadka-dambe. Xalalka Xogta Weyn waxay bixiyaan daruur martigelin, qaabdhismeedyo xog ururin heer sare ah iyo isugeyn leh, kaydinta otomaatigga ah iyo awooda soo saarida, iyo soo gudbinta isdhaafsiga ayaa loogu talagalay inay bixiso falanqeyn sax ah oo awood u siineysa ganacsiyada inay gaaraan go'aano wanaagsan.
Go’aamada ganacsi ee kafiican waxay ka dhigan yihiin in shirkaduhu ay yareyn karaan halista go’aanadooda, isla markaana ay gaaraan go’aano wanaagsan oo yareeya qarashaadka isla markaana kordhiya waxtarka suuqgeynta iyo iibinta.
Waa maxay Faa'iidooyinka Xogta Weyn?
computer wuxuu dhex socdaa halista iyo fursadaha laxiriira ka faaideysiga xogta weyn ee shirkadaha.
Xogta Weyn ayaa ku habboon - 60% maalin kasta oo shaqo ah, shaqaalaha aqoonta ayaa ku bixiya isku dayga raadinta iyo maaraynta xogta.
Xog Weyn Waa La Heli Karaa - Kala badh saraakiisha sare waxay soo wariyeen in helitaanka xogta saxda ah ay adagtahay.
Xogta Weyn waa mid dhameystiran - Macluumaadka waxaa hadda lagu hayaa silo dhexdeeda ururka dhexdiisa. Macluumaadka suuqgeynta, tusaale ahaan, waxaa laga heli karaa websaydhka Analytics, mobilada Analytics, bulsho Analytics, CRMs, A / B Qalabka Imtixaanka, nidaamyada suuqgeynta iimaylka, iyo inbadan… kasta oo diirada saaraya siloheeda.
Xogta Weyn waa Aaminaad - 29% shirkadaha waxay cabiraan qiimaha lacageed ee tayada xogta liidata. Waxyaabaha sida fudud u kormeerka nidaamyo badan oo ku saabsan cusbooneysiinta macluumaadka macaamiisha ayaa badbaadin kara malaayiin doolar.
Xogta Weyn waa Mid Khuseysa - 43% shirkaduhu kuma qanacsana awooddooda qalab ee ay ku shaandheeyaan xogta aan khuseyn. Wax u fudud sida macaamiisha looga shaandheeyo shabakadaada Analytics waxay ku siin kartaa tan aragti ah dadaalkaaga soo iibsiga.
Xogta Weyn waa Ammaan - Qiyaasta jebinta amniga xogta waxay ku kacaysaa $ 214 macaamilkiiba. Kaabayaasha amni ee ay dhisteen xogta weyn ee martigelinta iyo la-hawlgalayaasha teknoolajiyada ayaa badbaadin kara shirkadda celceliska 1.6% ee dakhliga sanadlaha ah.
Xogta Weyn waa Awood - 80% ururadu waxay la halgamayaan noocyo badan oo run ah waxayna kuxirantahay halka laga helo xogtooda. Marka la isku daro ilo badan oo la hubiyay, shirkado badan ayaa soo saari kara ilo sirdoon oo aad u sax ah.
Xogta Weyn waa Waxqabad - Xog duug ah ama xun ayaa keenta in 46% shirkaduhu ay gaaraan go’aanno xun oo ay ku bixi karto balaayiin.
Xogta Weyn iyo Falanqaynta Isbedelada 2017
2017 wuxuu noqon doonaa sanad gaar ah oo aad u xiiso badan ganacsiga tikniyoolajiyada siyaabo badan. Ganacsiyadu waxay ku dadaali doonaan inay miisaamaan miisaanka iyo feejignaanta shakhsiyaadka macaamiisha ah iyagoon wax u dhimin howlaha adag. Ketan Pandit, Fahanka Aureus
Halkan waa halka aad ku arki doontid xog weyn oo la istcimaalo:
94% xirfadlayaal suuqgeyn ah ayaa yiri shaqsiyeynta khibrada macaamiisha waa mid aad muhiim u ah
$ 30 milyan oo keyd sanadle ah iyada oo la adeegsanayo xogta warbaahinta bulshada ee sheegashooyinka iyo khayaanada Analytics
Marka la gaaro 2020, 66% bangiyada ayaa yeelan doona blockchain xagga wax soo saarka ganacsiga iyo miisaanka
Ururradu way isku hallayn doonaan xog caqli badan dheeraad ah marka la barbar dhigo xogta weyn.
Mashiinka-Aadanaha (M2H) isdhexgalka shirkaduhu wuxuu noqon doonaa mid dad ah ilaa 85% sanadka 2020
Ganacsiyadu waxay maalgashanayaan 300% dheeraad ah Sirdoonka Farsamada (AI) sanadkii 2017-kii marka loo eego wixii ay qabteen sanadkii 2016-kii
25% heerka koritaanka ee soo bixitaanka hadalka oo ah isha ku habboon ee xogta aan habeysnayn
Xaqa In La Illoobo (R2BF) waxaa diirada lagu saari doonaa aduunka iyadoo aan loo eegin ilaha xogta
43% ee kooxaha adeegga macaamiisha ee aan lahayn falanqaynta waqtiga-dhabta ah wuu sii yaraanayaa
By 2020, Xaqiiqda La Buuxiyay (AR) suuqa wuxuu gaari doonaa $ 90 bilyan marka la barbar dhigo Xaqiiqda Virtual ee $ 30 bilyan
Tags: xog waxqabad lehfahamus aureusxog weynblockchainsirdoonka ganacsigamaamulka xogtakalsoonida xogtaData Securityetlsoosaarayxogta guudwargelin ahculusm2hxogta ku habboonxogta waqtigaisbeddelxog lagu kalsoonaan karokala duwanxawaarerun ahaanshomugga
Mawduucu waa King… Laakiin Mid Kaliya Ayaa Xidhan Taajka
Imaatinka Suuq Gelinta, Saxaafadda, iyo Waxbarashada
Sep 13, 2017 at 1: 34 AM